Qiimaha Ay Leeyihiin Dumarka Soomaaliyeed ||Tukesomalism.com |
Cabdijabaar Sh. Axmed — February 9, 2016
Qoomiyad walbo waxay leedahay waxyaabo ay ku fanaan oo quseyso dadnimadooda iyo waxyaabaha ay ka soo maraan nolosha. Nolosha waxay soo maartaa heerer kalla duwan sidda heykalka dadnimadaada IWM. Guud ahaan waxaan jeclahay inaan waxyar ka tilmaamo qiimaha ay leeyihiin gabdhaha Soomaaliyeed iyo sawabta keentay inay noqdaan dumar qiimo ku leh bulshada Soomaaliyeed. Bulsho walbo oo caalamka joogo waxay ku faanta dadnimadeeda iyo cidda ay tahay.
Dumarka Soomaaliyeed waxyaabaha ay kuu fiicanyihiin waxaa kamid ah:
Baari nimada waalidkooda: Gabdhaha Soomaaliyeed waxay baari u yihiin waalidkooda. Waxaad arkaysaa hawsha guri oo dhan waxaa qabanayso gabadha, waxay aminsantahay inay tahay qofka la fiirsanaayo gurigga oo idil. Waxay marwalbo dadaal ugu jiraan siddii reerka ay ka dhalatay hawsha guriga iyo guud ahaan shaqada hooyo ay qabani laheed ay qabtaan. Gabdho badan ayaa masuuliyad adag iska saara hawlaha guriga iyo guud ahaan masuuliyadda gabarnimo. Markii qurbaha ay yimaadaan waxaad arkaysaa waxay aad ugu fakiraan reerahooda oo ka dambeeyay iyaga. Waxay kaga murug badan yihiin wiilasha. Waxa yar ay haystaan waxay jecelyihiin inay reerahooda u dirsadaan si waalidkeeda ay ugu raali noqdaan. Gabadha Soomaaliyeed haddii la soo doono oo la doonaayo in nin la siiyo haddii aysan rabbin xitaa oo ay waalidkeeda ku dhahaan waan kuu duceynaynaa raac ninkaan, wey iska raacaysaa iyadoo aminsan ducadda waalidka qiimaha ay leedahay.
Dumarka Soomaaliyeed waxaa lagu yaqanaa inay leeyhiin karti: sidda aan la socono taariikhyada Soomaaliyeed markaad aqriso waxaad oganaysaa in dumarka ay ahayeen kuwa kor u qaaday qiimaha raga Soomaaliyeed. Haddii ay noqoto gumeysiga dalka soo maray iyo guud ahaan la dagaalanka cadowga deriska ah. Taariikhda haddii aad ka raadiso meelo badan oo tilmaamaayo sidda ay ahayeen dumarka, waxaad oganaysaa inay ahayeen kuwa aad u karti badan oo la’aantooda raga aysan waxbo ahayn. Taariikhda soo jireenka ah waxay inoo tilmaamaysaa qiimaha ay leeyihiin dumarka. Dalwalbo wuxuu leeyahay haween oo ay ku faanaan. Sawabta keentay dal walbo inuu dumarkiisa ku faano ayaa ah aqqoonta ay u leeyihiin dumarkooda. Dumarka waa nuurka bulsho walbo oo duniddaan ka jirta.
Waxaan la wada soconaa Soomaaliya waxay soo martay dhibaatooyin badan waxaana qiimo dhacay qiimaha uu lahaa qoyska. Markay bur-burtay dowladdii horre ee Maxamed Siyaad Bare waxaa meesha ka baxay qiimaha qoyska iyo dadnimada dadka ay lahayeen. Dumarka waxay bulshada u ahayeen kuwa lagu tiirsanyahay marwalbo. Hooyo walbo waxay dadaal ugu kabo gashatay siddii ay ubadkeeda meel ugu soo saari lahayeen. Mid yaanyo iibiso, mid miis yar cusbo ku iibiso, iyo guud ahaan qaab walbo oo ay ku soo saari karto bulshadeeda iyo dadnimadeeda. Waxaa halkaas kaaga cad qiimaha iyo kartida u gaarga ah ay leeyihiin dumarka Soomaaliyeed.
La dhaqanka ragoodda: Dumarka Soomaaliyeed waxay baari u yihiin ragooda haddii la is bar-bar dhigo kuwa ka jiro daafaha dunidda kalle. Wey jiraan dumar Soomaaliyeed oo ragooda dhibaateeyo, balse waxaa badan inta wanaaga jecel. Gabadha sideedaba haddii ay wax ka taqaano diinteena waxaa u suurta gal ah inay si wanaagsan u fahanto la dhaqanka ninkeeda iyo bulshada markaas ku heeraarsan. Gabadhaha Soomaaliyeed markii ay isku dhacaan nimankooda waxay inta badan ku dadaalaan inay u samraan maxaa yeelay waxay inta badan qiimeyeen ubadka meesha soo galay. U fiirso qoyska Soomaaliyeed inta badan waxay leeyihiin caruur badan, Mansha Allah. Soomaali waxay heerkaan iyo illaa intaan jiritaankeena ku soo gaareen waa gabadha Soomaaliyeed. Wax badan ayay qabteen waxana kawada sugaynaa intaas iyo in ka badan inay u qabani doonaan bulshooyinka Soomaaliyeed. Haddii gabdhaheena aysan noqonin kuwa u wanaagsan bulshadooda iyo ragooda waxay helis ku yihiin jiritaanka ummada Soomaaliyeed. Gabdhooy haddii aad doonaysaan inuu sii jiro qoomiyadaha kuaftirsada Soomaali, ku dadaal inaad noqoto qof wanaagsan oo diinta Islaamka wax badan ka fahansan. Waxan hubaa haddii aad wax badan ka barato diintaada Islaamka waxaad fahmi doontaa qiimaha ugu weyn ee aad u nooshahay, qaasatan qiimaha aad ku leedahay bulshadaada. Dhammaantiina Farxad Kunoolaadda!!
Next post Faa’iidada wax aqriska u leeyahay Bulshada.
Previous post Sidee Ummadda Soomaaliyeed Xal Ku Heli karaan?||Tukesomalism.com